Inkampani yethu inamandla aqinileyo obugcisa, izixhobo eziqhubela phambili, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu emva kokuthengisa, ibambelela kwifilosofi yeshishini "umthengi kuqala kwaye aqhubele phambili" kwaye igxininisa kwintembeko njengokusinda kwenkampani. Konke kukwaneliseka kwabathengi, konke kuphuhliso lwexesha elide olusempilweni lweshishini. Kule minyaka ili-10 idlulileyo, besilawula ngokungqongqo yonke inkqubo yorhwebo, sigxininise kuzo zonke iinkcukacha, sibonelela abathengi ngeenkonzo ezijikelezayo ezifana nokuthengwa kwemveliso, i-R & D, ulawulo lomgangatho, ulawulo lolungiselelo njalo njalo, kwaye sithembeke. inkampani yentsebenziswano kunye neqabane kubathengi bethu. Kule mihla Sakha iindidi ezinkulu, isikali esikhulu, iindidi ezipheleleyo, idigri esulungekileyo, ixabiso elongezelelweyo kunye nobuchwepheshe obuphezulu bomxholo wekhonkco lemveliso .Kukho uluhlu oluninzi olubandakanya iimveliso zamachiza, izongezo zebakala lokutya, ibakala loshishino, ibakala lesichumisi kunye neemveliso zamaminerali.
Kwiminyaka emihlanu yakutshanje, inkampani iphumeze isicwangciso "sokuphuma" ngamandla. Siye saseka amasebe ethu e-Hubei China, eVietnam naseMexico, esenza inethiwekhi yethu yokuthengisa kunye nentengiso igqibelele ngakumbi. Inkampani yethu iya kuqhubeka nokubambelela ekubekweni kwesicwangciso soshishino lweekhemikhali ezilungileyo kwixesha elizayo kunye nokhuphiswano lweembono zokwahlulahlula kweemveliso ezingenakuphinda zibuyiselwe, kwaye sizame ukuba ngabaphambili kushishino lweekhemikhali zaseTshayina.
Njengendlela yokusebenzisa uvimba wolwazi kurhwebo lwamazwe ngamazwe, siyawamkela amathuba avela kuyo yonke indawo kwiwebhu nakwi-intanethi. Ngaphandle kwezinto ezikumgangatho ophezulu esizinikezelayo, inkonzo yothethwano esebenzayo neyanelisayo inikezelwa liqela lethu lenkonzo yasemva kokuthengisa. Uluhlu lwezinto kunye neeparitha ezineenkcukacha kunye naluphi na olunye ulwazi lwe-weil luthunyelwa kuwe kwangexesha malunga nemibuzo. Ke nceda uqhagamshelane nathi ngokusithumelela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba xa unemibuzo malunga nombutho wethu.